Ndụmọdụ zuru oke maka abalị - legalmusiconline.info
Hen Party in Vegas # 1: ayszọ iji chekwaa ego
Las Vegas, ma ọ bụ karịa kpọmkwem Vegas Strip, bụ ebe dị oke ọnụ maka ụlọ nkwari akụ, oge ntụrụndụ, na ọrụ ndị ọzọ ị nwere ike ile anya. Ichefughi oke casinos nke gbasasiri n’ofe gafee warara. Na ọtụtụ ọrụ ga-eme ka ịchọọ iji ego gị, ọ dị mkpa ịdebe ego gị. Otu ụzọ ịchekwa bụ, dịka ọmụmaatụ, itinye akwụkwọ ngwungwu sitere na ụlọ ọrụ mpaghara. Nke a na-emekwa ka usoro nhazi ahụ dị mfe ma mee ka njem ahụ dịkwuo mfe.
Fọdụ n’ime nchịkọta ndị dị oke ọnụ gụnyere naanị VIP maka klọb ndị ama ama na Las Vegas Strip, gụnyere Hakkasan, XS Omnia, KAOS, na ọtụtụ ndị ọzọ. Ationgbọ njem bụ akụkụ ọzọ dị oke ọnụ nke njem gị – njem ị ga-esi na klọb, casinos, na họtel nwere ike ịgbakwunye ntakịrị. Mgbazinye ụgbọ ala bụ ụzọ dị ọnụ ala na njem limo na tagzi. Ndị ụlọ ọrụ dịka “AutoRentals” na “Kayak” na-enye ụgbọ ala ha site na $ 28 / ụbọchị na elu.
Nnukwu osisi Hen na Vegas # 2: Ebee Ka Nọ
The warara jupụtara na hotels na a dịgasị iche iche nke price ranges – si ruo $ 100,000 a n’abalị na Nkwụ Casino Resort ka $ 21 a n’abalị na Excalibur, e nwere ọtụtụ nhọrọ iji mee ka gị Las Vegas hen night ideas to life . Ma ị na-achọ okomoko ma ọ bụ na-na a uko ego – ebe a bụ anyị onwe anyị na-atụ aro na ihe maka niile price àmà.
Ebe a na-egwu mmiri Casino nkwụ
Dịka e kwuru na mbụ, ụlọ nkwari akụ a bụ maka ndị na-emefu ego. O nwere ike ịbụ ụlọ nkwari akụ kachasị mma n’obodo. Yabụ ebe a ị gharịrị ịdị njikere itinye nnukwu ego – ị ga-enweta ahụmịhe ụlọ ahịa a na-agaghị echefu echefu na nloghachi!
N’ezie otu n’ime ezigbo ụlọ oriri na ọ iconụ hotelsụ kachasị achọta na Las Vegas Strip. Paris LV dị ọnụ ala karịa ka ị tụrụ anya ya, ya na ụlọ ga-amalite na $ 50 n’abalị. Ezigbo ụlọ oriri na ọ hotelụ hotelụ na-ahọrọ ndị ọbịa ya nke ọma. Paris LV bara uru ịtụle ma ọ bụrụ na ị na-achọ ịba ụba ma ị chọghị itinye ego ahụ.
Xlọ nkwari akụ Luxor & Casino
N’ịbụ nke dị n’ebe etiti na warara, Luxor na-enye ụfọdụ nhọrọ kacha mma na-eme na Las Vegas – yana ihe ngosi na ihe ị ga-eme kwa afọ. Luxor bụkwa ọnụ ala nke ndụmọdụ atọ a.
E nwere ọtụtụ narị ebe ị ga-anọ na Las Vegas, yana site na ịhazi na nyocha tupu oge eruo, ị ga-ahụrịrị ebe zuru oke iji nwee ahụmịhe otu anụ ọhịa na-agaghị echefu echefu.
Nnukwu osisi Hen na Vegas # 3: Ihe ị ga-eme
Enweghị ebe dị mma maka oriri ọkụkọ karịa Las Vegas. Site na ya ọtụtụ ihe egwuregwu na ihe nzuzu, na-agbapụta ọkụ ọkụ na warara niile, isi obodo ntụrụndụ nke ụwa anaghị agwụ ike!
A na-ewu ewu Las Vegas nne okuko n’abalị bụ ịga raunchy nwoke warara na-egosi na ụfọdụ n’ime neon isi obodo kasị ùgwù ụlọ ọrụ. Undergbè eluigwe si na ala n’okpuru na Chippendales pụta dị ka ihe atụ na-enwu gbaa nke ngosi nwoke. Maka ụmụ nwanyị niile sitere n’ike mmụọ nsọ Magic Mike, Channing Tatum nyere premiere nke “Magic Mike Live” na Hard Rock Hotel na 2017. Nke a bụ ebe ị ka nwere ike ịchọta ụfọdụ ihe nkiri na-atọ ọchị na nke omume rụrụ arụ n’obodo taa.
Ọtụtụ na-ele ezigbo njem nlegharị anya anya dị ka okpueze nke mmeri ọ bụla Las Vegas hen. Na warara na-enye ọnụọgụ nhọrọ maka nke a. Ọbụghị naanị ụlọ mmanya, kamakwa ụfọdụ ụlọ ịgba egwu abalị a na-ewere dị ka ndị kachasị mma n’ụwa ka ị nwere ike ịhọrọ. Klọb dị ka Omnia, The Marque, na ndị a kpọtụrụ aha na Hakkasan nwere naanị obere akụkụ nke nnukwu ndụ abalị na Vegas. Akpọghị obodo ahụ “Sin City” n’efu.
Nnukwu ohia na Vegas # 4: Otu esi zuru ike na Vegas
Kedu ihe nwere ike ịdị mma karịa ịlaghachi na spa ụbọchị niile mgbe ị na-eri oriri abalị na isi ọwụwa na mmanya na-egbu onwe gị iji aka na ịhịa aka. Zọ zuru oke iji weghachite ị alcoholụbiga mmanya ókè bụ ịga leta QUA Baths & Spa na Caesars Palace. Spa bụ nnukwu akụkụ mita 4000 buru ibu nke gụnyere ịsa ahụ ndị Rom atọ na ọtụtụ ụlọ sawụna dị iche iche, yana uniquelọ Ice Ice pụrụ iche nke dị mma dịka ị nwere ike iche.
Ma ọ bụ ma eleghị anya, ị ga – achọ ịga karịa Sahra Spa & Hammam, nke dị na The Cosmopolitan. Spa a na-enye ọzara-sitere n’ike mmụọ nsọ ala mmiri na-adọrọ adọrọ waterfalls na ịrịba ije. Ma ọ bụ ọ bụrụ na ike gwụsịrị gị ma nwee egwu, gịnị ma i lelee Floyd Lamb Park nke obodo. Ala okike a gbatagburu karịa hectare 2,040 ma na-enye ọmarịcha echiche banyere ndagwurugwu Nevada, mpaghara picnic na ọdọ mmiri ndị nwere ọdịdị zuru oke nke dị mma maka igwu mmiri na izu ike.
Nnukwu osisi Hen na Vegas # 5: Homelọ na-abata
Ọbụlagodi na ịchọrọ ka ọ kwụsị, oge na-abịa mgbe ị ga-azọda ọdụ ụgbọ elu ma laghachi ụwa n’ezie. Eeh, nkenke ezumike ga-adiriri, ma enwere olile anya na ị gbafuola ọtụtụ foto wee mepụta ụfọdụ ezigbo ncheta na ndị enyi nwanyị gị nke ga-adịgide ndụ. Nke kachasị mkpa, n’ezie, na-atụ anya na ị nwere ego zuru ezu na akaụntụ iji mee ka ọ laa!
Ọ bụrụ na ịchefu egwuregwu cha cha na nloghachi gị, echegbula onwe gị, gị na ụmụ gị nwanyị ka nwere ike igwu egwuregwu okpokoro Vegas na saịtị kacha mma blackjack na casinos online. Saịtị niile anyị na akwadoro nwere mkpokọta egwuregwu dị egwu maka mgbede ọzọ agaghị echefu echefu!